डा.गोविन्द केसी प्रहरीको घेराबन्दीमा –
डा.गोविन्द केसी प्रहरीको घेराबन्दीमा
चिकित्सा क्षेत्रमा चर्नित सामाजिक अभियन्ता डा. गोविन्द केसी बसेको होटल प्रहरीको घेराबन्दीमा परेको छ । आफूले राखेका माग पूरा नभएसम्म अनशन बस्ने चेतावनी सहित अनशन बस्न जुम्ला पुगेका डा.केसी बसेको होटल प्रहरीले घेराउ गरेपछि उनी बाहिर निस्कन सकेका छैनन् ।
प्रहरीले निस्किन नदिएपछि उनले अनशन एक हप्ताका लागि स्थगित गरेका छन् । प्रहरी प्रशासनले आफूलाई होटलमा घेराबन्दी गरेको डा. केसीले बताएका छन् ।प्रहरीले डा. केसी बसेको होटलभन्दा ५ सय मिटर पूर्व–पश्चिममा निषेधित क्षेत्र भन्दै बुधबार साँझदेखि कसैलाई जान नदिएको बताइएको स्थानीयले बताएका छन् ।
बिहीबार उनलाई भेट्न पुगेका सञ्चारकर्मीलाई पनि प्रहरीले रोकेको थियो । डा.केसीले अनसन बस्न खोजेको ४ वटै स्थानमा स्थानीय प्रशासनले सुरक्षाकर्मी खटाएको छ ।आफ्ना माग पूरा नभएको भन्दै भदौ ११ गतेदेखि डा. केसीले सत्याग्रह घोषणा गरेका थिए । हुम्ला, मुगु, कालीकोटलगायत जिल्लामा निःशुल्क शिविर चलाएर डा. केसी एक महिनादेखि जुम्ला बसिरहेका छन् ।
डोल्पामा शिविर चलाउन गएका उनलाई स्थानीय जनप्रतिनिधि र स्वास्थ्यकर्मीले अवरोध गरेपछि केसी जुम्ला फर्किएका हुन् ।
« बागलुङमा विषादीयुत्त साग खादा एकै परिवारका चार गम्भीर विरामी
कुलमान घिसिङले विज्ञप्ति नै निकालेर गरे यस्तो अनुरोध »